အကောင်းဆုံး Skin Care Hot Sale Anti-Aging Bulk Coenzyme Q10 98% Powder ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံ |Yeme
Skin Care Hot Sale Anti-Aging Bulk Coenzyme Q10 98% Powder
ထုတ်ကုန်အမည်- Coenzyme Q10
သတ်မှတ်ချက်- 10% 20% 98%
အသွင်အပြင်- အဝါရောင် သို့မဟုတ် လိမ္မော်ရောင် အဝါရောင် ပုံဆောင်ခဲမှုန့်
＆အသုံးပြုမှုအတိုင်းအတာ- အစားအသောက်ထည့်ဝင်သောပစ္စည်းများ၊ ဖြည့်စွက်စာများ၊ ကျန်းမာရေးအစားအစာများ။
＆ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ- ကလိုရိုဖောင်၊ ဘန်ဇင်း၊ ကာဗွန်တက်ထရာကလိုရိုက်၊ အက်စီတွန်၊ ရေနံအီသာနှင့် အီသာတွင် ပျော်ဝင်၊ အီသနောတွင် အနည်းငယ်ပျော်ဝင်သည်၊ ရေနှင့်မီသနောတွင် မပျော်ဝင်ပါ။၎င်းသည် အလင်းအောက်တွင် ပြိုကွဲရန်လွယ်ကူပြီး နီမြန်းသောအရောင်ရှိပြီး အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆတွင် အတော်လေးတည်ငြိမ်သည်။
အသွင်အပြင် အဝါရောင်မှ လိမ္မော်ရောင် ပုံဆောင်ခဲမှုန့်
IR ရည်ညွှန်းချက်နှင့် ကိုက်ညီသည်။
ဆန်ခါဖြာ 100% pass 40 mesh
မီးလောင်မှုတွင် အကြွင်းအကျန်များ ≤0.10%
ဆန်းစစ်ချက် Coenzyme Q10 98.0 ~ 101.0%
1.သဘာဝဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းအဖြစ်၊ အင်ဇိုင်း Q10 ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပအတွက် အလှကုန်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Coenzyme Q10 ကို အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော အစွန်းရောက်များကို ဖယ်ရှားရန်၊ အရေပြားအိုမင်းမှုကို နှောင့်နှေးစေကာ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် အာနိသင်များ ပါဝင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
2.Coenzyme Q10 သည် အရေပြားအတွင်းသို့ ထိထိရောက်ရောက် စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး ဆဲလ်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း၊ အရေပြား အသွင်အပြင်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အသားအရေကို သန့်စင်စေပါသည်။
3. အရေပြား ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှု မြန်ဆန်စေခြင်း၊ အရေပြား အရေးအကြောင်းများကို ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ အရောင်ခြယ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးပြီး အသားအရေ တင်းရင်းမှုကို ပြန်လည်ရရှိစေသော အာနိသင်များ ရှိပါသည်။
4. အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တားဆီးပေးခြင်း၊ အရေးအကြောင်းများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ ဖြူဝင်းစေပြီး အသားအရေကို စိုပြေစေပါသည်။
5. ၎င်းသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘေးကင်းပြီး ယားယံခြင်းမရှိသည့်အပြင် အလှကုန်၏ လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုး၏ လိုအပ်ချက်များအရ အမျိုးမျိုးသော လိမ်းဆေးများနှင့် ခရင်မ်များအဖြစ် ဖော်စပ်နိုင်သည်။
အလှကုန်ပစ္စည်းများတွင်၊ Coenzyme Q10 ၏ထိရောက်သောအာရုံစူးစိုက်မှုသည် 0.01% မှ 1. O% ဖြစ်သည်။အလှကုန်များတွင် Coenzyme Q1o ၏အာနိသင်သည် အဓိကအားဖြင့် အရေးအကြောင်းများကို ဆန့်ကျင်သည့်အာနိသင်ဖြစ်သည်။
ယခင်- စက်ရုံမှပံ့ပိုးမှုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း အလှကုန်အဆင့် သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်အပင်ထုတ်ယူမှု အော်ဂဲနစ်စစ်မှန်သောအမှုန့် CAS 472-61-7 Astaxanthin
နောက်တစ်ခု: Antixoidant Resveratrol Powder 98% Polygonum Cuspidatum Extract Resveratrol
ကိုအင်ဇိုင်း Q10 ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊
Coenzyme Q10 98%၊
Coenzyme Q10 အစုလိုက်
Coenzyme Q10 အမှုန့်
ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော Coenzyme Q10
Factory Supply Best Price Cosmetic Grade Natura...